Where ( eg. Alone, Hlaing,Yankin...) Bahan Ahlone Bahan Botahtaung Dagon Dagon Seikkan Dala Dawbon East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Insein Kamayut Kyauktada Kyeemyin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingalar Taung Nyunt Mingalardon North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Gyi Kha Naungto Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Tarmwe Thaketa Than Lyin Thingangyun Yankin
Welcome to Bahan
Bahan Township is located in the north central part of Yangon. The township comprises 22 wards and shares borders with Yankin Township and Mayangone Township in the north, Sanchaung Township and Kamayut Township in the west, Tarmwe Township in the east, and Dagon Township and Mingalar Taung Nyunt Township in the south. Bahan is one of the most prosperous townships in Yangon. Shwetaunggya (formerly, Golden Valley) and Inya Myaing are two of Yangon's most exclusive neighbourhoods.
Over 3,300 businesses situated in this area, nearly around 60,000 employees working in these respective businesses, Area: 8.8 sq km – Density: 10,944/sq km , Total Population 96,732 people living in this township. The township has seventeen primary schools, three middle schools and three high schools. Postal codes 11201
This is one of Yangon’s most up-market areas and includes the location of “Golden Valley” where some of the most affluent properties in Yangon are available. Many colonial style large homes surrounded by large gates are prominent in Golden Valley, inacalm, quiet, tree-lined area. Bahan is probably one of the most convenient locations to live in Yangon due to its central location. The Bogyoke Aung San Museum located in Bahan isamuseum dedicated to General Aung San, the founder of modern Myanmar (Burma). Established in 1962, the two-story museum was Aung San's last residence before his assassination in July 1947.
The Sakura Residence in Inya Road isawell-known serviced accommodation, and so is Golden Hill Towers off Kabar Aye Pagoda Rd. The downtown is 15- 25 mins away, there is good access to the north for Myanmar Plaza, Melia Hotel and Sedona Hotel, etc. and of course almost every time you look south from Bahan you can see the beautiful Shwe Dagon Pagoda.
Furthermore, Bahan hasagood range of restaurants and bars particularly along Shwe Gon Daing Rd and surrounding the boutique Savoy Hotel on Inya Rd, but nothing beats Yangon’s top gourmet street along Sayasan Rd, below New University Rd. Sayasan boastsarange of delicacies from Italian, Pizza, Japanese, Chinese, Korean and even great tea shops and bakeries.
ဗဟန်းမြို့နယ် သည် အနောက်ပိုင်းခရိုင်တွင် ပါဝင်ပြီး အကျယ်အဝန်း ၃ ဒဿမ ၄၁၃ စတုရန်းမိုင် ရှိသည်။ ပတ်ပတ်လည်တွင် အင်းယားကန်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ကန်တော်ကြီး၊ ဒဂုံမြို့နယ်နှင့် ကမာရွတ်မြို့နယ်တို့ ဝန်းရံထားသည်။
ဗဟန်းမြို့နယ် မြေနေရာသည် ရှေးမြန်မာမင်းများ လက်ထက်က ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ထွက်ရပ်ပေါက် လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသော ဗဟုံးကျောက်များ ထွက်ရှိရာနေရာတစ်ခု ဖြစ်သဖြင့် ဗဟုံးအရပ်ဒေသဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ ကာလရွေ့လျားသောအခါ ဗဟန်းဟူ၍ ဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဗဟန်းမြို့နယ်အဖြစ် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်မှာ ယခုတိုင်ဖြစ်သည်။
မြေအနေအထားမှာ အရှေ့ပိုင်းတွင် မြေပြန့်အနည်းငယ်ရှိပြီး ကျန်နေရာ အများစုမှာ ကုန်းမြင့်များနှင့် လျှိုမြောင်များ ဖြစ်သည်။
ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက် (၂၂)ခု ပါဝင်သည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ စာရင်းများအရ ၎င်းရပ်ကွက်များတွင် အိမ်ခြေ (၈ ၃၄၁)ခု ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၇ ၆၃၇)စု ရှိသည်။ စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ (၇၈ ၆၈၆)ဦး ဖြစ်သည်။
ထင်ရှားသည့် ဘုရားစေတီပုထိုးများမှာ ကြေးသွန်းဘုရားကြီး၊ ငါးထပ်ကြီးဘုရား နှင့် ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားတို့ ဖြစ်သည်။ မိုးကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာ၊ မဟာစည်သာသန့ာရိပ်သာ၊ ရွှေမင်းဝံသာသန့ာရိပ်သာ၊ ဓမ္မဇောတိဝိပဿနာရိပ်သာ၊ ရွှေတောင်ကုန်းသာသန့ာရိပ်သာ အစရှိသည့် ထင်ရှားသည့် ရိပ်သာများ ရှိသည်။
သမိုင်းဝင်နေရာများမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်၊ အာဇာနည်ဗိမာန်၊ သူရဲကောင်းစစ်သည်ဗိမာန်တို့ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတိုက်နှင့် ပုံနှိပ်တိုက်တို့ တည်ရှိရာ မြို့နယ်လည်းဖြစ်သည်။
Business Collection Group (BCG) ၏ အချက်အလက်များအရ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း စုစုပေါင်း (၃ ၃၀၀)ကျော် ရှိပြီး လုပ်သားအင်အား (၆၀ ၀၀၀)ဦးခန့် ရှိသည်။ အချက်အချာကျသည့် နေရာတွင် တည်ရှိသော မြို့နယ်ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဟိုတယ် (၄၀)ကျာ်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆေးရုံကြီး (၄)ခု၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်း အများအပြား၊ ကားအရောင်းပြခန်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဘဏ် (၃၁)ခု တည်ရှိသည်။ အခန်းပေါင်း (၅၂၃)ခန်း ရှိသော Melia ဟိုတယ်သည် အခန်းအများဆုံး ရှိသည့် ဟိုတယ် ဖြစ်သည်။ အခန်းပေါင်း (၁၉၈)ခန်း ရှိသော ယုဇနဟိုတယ်သည် အခန်းဒုတိယ အများဆုံး ရှိသည့် ဟိုတယ် ဖြစ်သည်။ တတိယ အခန်းအများဆုံး ဟိုတယ်မှာ အခန်းပေါင်း (၁၆၈)ခန်းရှိသော Clover Suites Royal Lake ဖြစ်သည်။
စာပို့သင်္ကေတအမှတ်မှာ ၁၁၂၀၂ ဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍအနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ အရောင်းဆိုင်များ ရှိပြီး မြဝတီ၊ Max Myanmar, Denko, Petro Kနှင့် Petro7တို့ လုပ်ကိုင်သော အရောင်းဆိုင်များ ဖြစ်သည်။
တနိုင်တပိုင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအနေဖြင့် ကန်တော်ကြီး ရေကန်နှင့် ဆက်စပ်လျက် ရှိသော ဗိုလ်ချို (၁) ရပ်ကွက်ရှိ မြေပဒေသာကျွန်းတွင် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ ဖြစ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမျိုးစုံတို့ ရောင်းချပါသည်။ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းပင်သတ်ဆေး အစရှိသည်တို့လည်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ထင်ရှားသည့် ဈေးများမှာ ဗဟန်းဈေးနှင့် ဗိုလ်ချိုဈေးတို့ ဖြစ်သည်။
အစိုးရပညာရေးကဏ္ဍတွင် မူလတန်းကျောင်း (၁၈)ကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း (၃)ကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်း (၃)ကျောင်း ရှိသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများမှာ အောင်မြေသုခကျောင်း၊ စတုဘုမ္မိကကျောင်း နှင့် သုံးထပ်ကျောင်း တို့ ရှိသည်။
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ထင်ရှားသည့် ဆေးရုံများမှာ ဇီဝိတဒါန သံဃ့ာဆေးရုံ၊ တိုင်းရင်းဆေးရုံ၊ ဗဟန်းအမျိုးသမီးဆေးရုံ၊ SSC ဆေးရုံ၊ သျှင်ပါဂူဆေးရုံ၊ Kembangan-UHC နှင့် နှင်းဆီကုန်းဆေးရုံတို့ ဖြစ်သည်။ ကုတင် (၅၀) ဆန့် ဗဟန်းအမျိုးသမီးဆေးရုံကို ဒေါ်ခင်ကြည်ဆေးရုံဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကျန်းမာရေး၊ မီးဖွားပေးခြင်း၊ ကလေးကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းတို့ကို အဓိကအားဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
Hnin Si Gone Home for The Aged
Population In Conventional HouseHolds 78,793 78,793
Number Of Convetional Households 17,426 17,426
•In Bahan Township, there are more females than males with 89 males per 100 females.
•All population in Bahan Township lives in urban areas.
•The population density of Bahan Township is 10,945 persons per square kilometre.
•There are 4.5 persons living in each household in Bahan Township. This is slightly higher than the Union average.
Productions 61 5281
Retails 934 6157
Wholesales 344 15564
Services 1974 28877
Trading 76 3893
All about Bahan
: U Tun Myint
: +95931091597
: U Aung Myat Kyaw
: +9595160 752
: U Thaung Htut
: +9593106 2690
Address : 192, Unit (01 & 03), Kaba Aye Pagoda Rd., Myanmar Center Tower (1), Level-14,
Phones : 01-9345143, 01-9345146
Address : 165/167, U Chit Maung Rd., Saya San (North-West) Ward,
Phones : 01-541302, 09-5123290, 09-5021838
Address : 520, Kaba Aye Pagoda Rd., Shwe Gon Daing,
Phones : 01-558863, 01-558867, 01-558868, 09-5001326
King Metal Trading Co., Ltd.
Address : 182, West of Shwe Gon Daing Rd.,
Phones : 01-8603199, 01-8603177, 01-548969, 09-43142599, 09-43157299